Dava Ebe A Na-Arụ Ọrụ - Imewe Mmewe
Ebe A Na-Arụ Ọrụ A na-emepụta Dava maka ọfịs oghere, ụlọ akwụkwọ na mahadum ebe ọnọdụ dị jụụ na oge ọrụ dị mkpa. Modulu ahụ belata ọgba aghara na ntamu anya. N'ihi ọdịdị nke akụkụ atọ ya, arịa ụlọ dị obosara ma na-enye ohere nhọrọ dịgasị iche iche. Ihe di iche iche nke Dava bu WPC na aji nwere ajiri ajiri mee, ihe abuo nke ihe ndi ndu. Usoro nkwụnye ahụ na-edozi mgbidi abụọ ahụ na tebụl ma gosipụta ịdị mfe nke mmepụta na njikwa.
Aha oru ngo : Dava, Aha ndị na-emepụta ya : Michael Strantz, Aha onye ahịa : .
Ebe A Na-Arụ Ọrụ Michael Strantz Dava